Kedu ihe bụ IDFA? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na I	» IDFA
IDFA bụ okwu mkpọ okwu maka Njirimara maka ndị mgbasa ozi.
ihe nchọpụta ngwaọrụ enweghị usoro nke Apple kenyere na ngwaọrụ onye ọrụ. Ndị mgbasa ozi na-eji nke a soro data ka ha wee nwee ike wepụta mgbasa ozi ahaziri ahazi. Site na iOS 14, a ga-eme nke a site na arịrịọ Nwepu karịa na ndabara.